Anwar Gargash: “Argagaxa Qadar ku hayso Imaaraadka ee ka dhacaya Soomaaliya waa nasiibdarro mug weyn” – Radio Daljir
Luulyo 31, 2019 12:58 g 0
Dr Anwar Gargash, Wasiiru Dowlaha Arrimaha Dibadda UAE, oo Dubai maalinkii Arbacada saxaafadda kula hadlaya. Ruel Pableo for The National
Warbixin lagu soo bandhigay joornaalka aad loo daalacdo ee The New York Times ayaa daaha ka rogay heerka ay marayso falalka argagixo ee dowladda Qadar ka fuliso Soomaaliya ayada oo kaashaneysa waxa loogu yeeray “saaxiibadeeda Soomaaliya.”
Joornaalka ayaa soo bandhigay caddaymo muujinaya sida Qadar oo kaashaneysa “saaxibadeeda Soomaaliya” ay magaalada Bossaso uga fulisay qarax weyn oo lala beegtay Maxkamadda Bossaso. Qarraxaas waxaa ku dhaawacmay ku dhawaad 15 qof. Caddaymaha joornaalku soo bandhigay ayaa muujiyey hadafka Qadar ee Soomaaliya, kaas oo ah in ay isku ballaariso Soomaaliya, isla markaasna ay wiiqdo isku xirka iyo ganacasiga ka dhexeeya Imaaraadka iyo dalka Soomaaliya.
Caddaymaha oo ay kamid yihiin wada hadal dhanka taleefoonka ah oo la duubay, una dhexeeya safiirka Qadar ee Soomaaliya iyo ganacsade Khaliifa Al Muhanadi, ahna ganacsade ka agdhow Amiirka Qadar.
Duubista ayuu ganacsade Khalifa Al Muhanadi oo safiirka u muujinaya shaqadii Bossaso laga qabtay waxa uu safiirka u sheegay in “saaxibadeen ay qaraxa fuliyeen.”
Hoos ka dhegayso wada hadalka safiirka iyo ganacsade Muhanadi oo Radio Daljir tarjumay:
Datoor Anwar Gargash oo ka jawaabaya qaraxyada Qadar la beegsatay Bossaso ayaa yiri, “duubista la soo bandhigay waa khatar jidha, mana aha wax maanta la beenin karo.”
Isla duubistaas ayaa The New York Times ku soo bandhigtay ganacsade Al Muhanadi oo leh argaggaxu waa muhii “si dadkaas Dubai looga cayrsado meesha.” Asaga oo sii wata waxa uu ku daray “Ha la cayrsho Imaaraadka, oo yaan heshiiska loo cusbooneysiin, si anna markaas aan heshiis ula galno, heshiiskana Dooxa u keeno.”
New York Times oo labada masuul ee Qadar weydiiyey in codka laga duubay uu koodi yahay iyo in kale, ayaan marnaba beenin duubista, laakiin sheegay in aysan markaas mataleynin dowladda Qadar, laakiin se ay ahaayeen muwaadiniin si xor ah u hadlay.
Weerarka Bossaso ee May 2019, waxaa ka horreeyey kii Febraayo 2019 ee lagu dilay Paul Farmosa, Agaasimihii Dekedda Bossaso ee shirka PO Ports, ahna shirkad hoostimaada DP World oo ah shirkad dowli ah oo ay leedahay dowladda Imaaradka.
Ururka Al Shabaab ayaa sheegtay dilka iyo qaraxa Bossaso, ayaga oo dowladda Imaaraadka ka dalbanaya in ay isaga baxaan Soomaaliya.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 478 Wararka 20365
Mushaarka ay qaatan Ciidamadda AMISOM oo la dhimayo